トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ukuze uthole ephelele okungenzeka theory of pa o
Wena, indlela ukuqinisekisa big hit in the pachinko ngaphakathi, ngicabanga ukuthi iningi labo zifikelwa engacabangile kakhulu. umshini pachinko, okuyinto ke ukufakwa sasemakhazeni pachinko okungukuthi, thina sonke esike jackpot e okufanayo ilotho indlela.
Lokhu, ziba incike izenzakalo umkhakha, umshini pachinko okungahambisani uyivikele, ngokusebenzisa sibhekwe ngokusebenzisa ukubambisana inhlangano ukuze nokuhlola konke ukuphithizela umshini pachinko, ngeke bakwazi ukuthengisa. Futhi ilotho isendleleni uzimisele, ekhuluma ngalokho izinto, nawe ilotho indlela okungenzeka indlela egcwele. I
izibalo, kuthiwa okuzimele. Ukuze uthole esike jackpot e
pachinko, kukhona umhlangano okungukuthi lottery okungahleliwe ngokuphelele. Ngo, ephelele okungahleliwe ngokuphelele amathuba izinga uhlelo, onjani ilotho isikimu lokho ukwethula kafushane.
futhi lokhu okungenzeka indlela ephelele, kanye yesikhathi esisodwa ilotho kuzimele, iyona ndlela lotto ayitsintseki imiphumela esidlule kanye nokunye okufana nalokho. Kuyinto nobunzima ukuqonda kancane, kodwa, isibonelo, kukhona ibhola obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe.
uqale kwaze kwaba ibhola ingena, ezintathu ilotho amabhola abamzungezile e kancane roulette kancane. Uma umbala obomvu Kuyinto ibhola hit, okwamanje eyaphenduka isithombe siqukethe pachinko amabhola ukuqala, ukumisa roulette, iba big hit ukunquma uma kukhona obomvu-ibhola emkhakheni we ngamunye.
Uma ibhola white lapha, kodwa ngeke Yebo miss uma efakwa hit kukholomu roulette, okungenzeka indlela egcwele, njengoba akazange athonywe imiphumela esidlule, ubuyele Matamoto, ilotho ngaphansi kwezimo ezifanayo ngaso sonke isikhathi kusukela ekuqaleni ke Kwenziwa.
ngendlela okungahleliwe ngokuphelele, iba noma yiluphi uhlobo lwento kuyinto ilotho ezimele kanye kanye, yilokhu ukuthi okungenzeka indlela egcwele. Ngakho, leso sikhathi nithi kwakuthiwa kunezikhathi ezihlukene 1000 Hama wax kuyinto, 2000 izikhathi Hama wax, kodwa kwakungeke kudingeke uphendukisa kanye, ukudweba isimo kuyafana, kuyoba nje yokuthi inhlanhla.
Nokho umshini, ke It ezama bukhomba ku-abafanele jackpot okungenzeka. Ngakho-ke, le mishini yayithatha uma ulandela ewohloka ukuzama Khonza hit. Lokho into kuthiwa igagasi nangempela ngayibamba, okuyinto wathi kahle emigwaqeni.
esizayo ukubikezela, ngoba edonsa nangempela ngayibamba, kodwa obukeka kangcono bamba indlela, lena inkinga. Bheka imiphumela ezidlule nangempela ngayibamba, uzokwazi ukubona igagasi eqinile futhi ecasukile, kodwa esike jackpot kuphela eyenziwa ngokungahleliwe.
ngisho yayizovela ngezinga elithile isikhathi, ngokuqinisekile, yokuthi win uma aim ngalesisikhathi, Obani ayikwazi abikezela, yokuthi kungcono pachinko nawo. Njengoba
Hanemono kuyinto esitolo ngaphansi une Horukon njengoba umshini CR, ungase ufune ukwazi ukuthi we okungenzeka ilotho egcwele. Endabeni izitolo ukuthi ziyoba nhlobonhlobo ematfuba jackpot e Horukon, kodwa kukhona impela okungenzeka ngokuphelele, kodwa anencazelo engavamile.